”Nooma iman kartaan!” – Imaaraadka oo Yaman ka dhisay wax u eg maamullada Somalia (Dowladda Dhexe oo uu durba isku taagey!) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Nooma iman kartaan!” – Imaaraadka oo Yaman ka dhisay wax u eg...
”Nooma iman kartaan!” – Imaaraadka oo Yaman ka dhisay wax u eg maamullada Somalia (Dowladda Dhexe oo uu durba isku taagey!)
(Cadan) 20 Maajo 2020 – MW Xigeenka Maamul gooni u goosad doon ah ama ugu yaraan xukun hoosaad leh oo uu Imaaraadku dalka Yaman ka yabyabay, ayaa ka dhaartay inay Ciidamada Dowladda dhexe u daayaan ilaalinta xeebaha dalkaasi.
Guddoonka Golahan Golaha KMG ah ee Koonfurta ee STC, Hani Bin Brik, kaasoo ku dhawaaqay inay doonayaan inay nidaam ilaa xad madax bannaan kaga dhawaaqaan Koonfurta Yaman ayaa arrintan ku dhawaaqay.
“Horta isbahaysiga uu Sucuudigu hoggaaminayo haku cadaadiyo MW Abd Rabbuh Mansur Hadi fulinta Heshiiskii Riyaad,” ayuu yiri Bin Brik isagoo sheegay in heshiiskaasi uu dhigayo in lasoo dhiso dowlad ay xubin muhim ah ka yihiin STC.
Sida uu sheegay Bin Brik, isbahaysiga Carabta ayaa ku simaha Madaxwaynaha STC, Sarreeye Gaas Ahmed Saeed Bin Brik, ka codsaday inuu doonyo dagaal oo uu ku hayo ku wareejiyo Ciidamada Ilaalada Xeebaha ee Dowladda Dhexe oo ay taasi shaqadooda tahay.
Waxay sidoo kale STC oo ay si furan Imaaraadku u taageeraan ku eedeeyaan in ay Dowladda Yaman u diidan yihiin inay gudato waajibaadkeeda Dastuuriga ah.
Sucuudiga iyo Imaaraadka ayaa iminka isku khilaafsan sida laga yeelayo aayaha Yaman oo ah dal ay dhulka dhigeen kaddib dagaal ay 5 sano halkaa ka wadaan, iyadoo ay STC u dabci egtahay maamul-goboleedyada Somalia.
Previous article“Maxaa mar kasta loo aqbalayaa codsiga Kenya?” – DF Somalia oo ay su’aal adagi hortaallo, arrin ay samaysay oo shaki abuuray & tillaabo ay qaadi jirtey dowladdii ka horreeysey oo…
Next articleCiidamada Libya oo sheegay inay burburiyeen Pantsir S-1 kale (Arag tirada guud ee ay burburiyeen?)